AMNESTY International oo soo dhoweysay Xarigga Cabdirashiid Janan | Xaysimo
Home War AMNESTY International oo soo dhoweysay Xarigga Cabdirashiid Janan
AMNESTY International oo soo dhoweysay Xarigga Cabdirashiid Janan
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayey dowladda Federaalka Soomaaliya qabatay, waxaana loo haystaa “dembiyo la xiriira xuquuqda aadanaha”.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay xabsiga dhigtay Cabdirashiid Janan, wasiirka amninga ee Jubaland. Dowladdu waxay sheegtay in Cabdirashiid Janan loo haysto “dambiyo culus” oo uu galay.
Kuxigeenka taliyaha booliska ee Soomaaliya, Sareeye-guuto Zakiya Xuseen, waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay: “Ciidanka Boliiska Soomaliyeed ayaa taariikhdu markay ahayd 31/08/2019 soo xiray eedeeysane Cabdirashiid Xassan Nuur ‘Janan’ kaasoo ku eedaysan dambiyo culus.”
Cabdirashiid Janan wuxuu ka mid yahay wasiirrada ugu awoodda badamaamulka Jubbaland
Waa kuma Janan? Billowgii kacaankiisa maamul
Bishii Oktoobar ee sannadkii 2018-kii, wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirishiid Janan oo la hadlayay saraakiisha ciidamada ee maamulkaas wuxuu dowladda federaalka ah ku eedeeyay in ay faragalin ku hayso maamulkooda, wuxuuna ka digay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan ciddii kusoo xad gudubta.